चितवनको खैरहनीबाट नगदसहित जुवा तास खेल्ने ८ जना पक्राउ « News24 : Premium News Channel
चितवनको खैरहनीबाट नगदसहित जुवा तास खेल्ने ८ जना पक्राउ
चितवन । पूर्वी चितवनको खैरहनीबाट नगदसहित जुवा तास खेल्ने ८ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पूर्वी चितवनको खैरहनी न.पा.वडा नं. ८ लक्ष्मीनगरस्थित कृष्ण श्रेष्ठको घरमा तास तथा कौडा खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा मंगलबार साँझ ५ बजेको समयमा नगदसहित ८ जनालाई प्रक्राउ गरिएको हो ।
प्रहरीले सुचना प्राप्त गरेपछि खानतलासीका क्रममा घरबेटीसहित ८ जनाबाट १ बुक तास र एक लाख ४४ हजार १ सय ७० रकम बरामद गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा खैरहनी न.पा.वडा नं.८ लक्ष्मीनगर बस्ने बर्ष ४१ वर्षका कृष्ण श्रेष्ठ, खैरहनी न.पा.वडा नं.६ पुरानोपर्सा बस्ने ४४ वर्षका नविन बस्नेत, खैरहनी न.पा.वडा नं. ८ पर्सा बस्ने ४१ वर्षका बिष्णु सुनार, राप्ती न.पा.वडा नं.६ भण्डारा वस्ने ३९ वर्षका सुदिप गिरी रहेका छन् ।
यसैगरी राप्ती न.पा.वडा नं.६ भण्डारा बस्ने २८ बर्षका दिपेश बर्तौला, राप्ती न.पा.वडा नं. ६ भण्डारा बस्ने ३६ बर्षका चुडामणी थपलिया, राप्ती न.पा.वडा नं.४ डडुवा बस्ने ६८ बर्षका केशव प्रसाद तिमिल्सिना र राप्ती न.पा.वडा नं.५ भण्डारा बस्ने ३५ वर्षका सुदन धरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धान भइरहेको र कानूनबमोजिम कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ ।